Nhau - Dzokera kune yechokwadi-mitambo mbatya yemhando yambiro
Dzokera kune yechokwadi-mitambo mbatya yemhando yambiro
Iko kukanganisa kwenzvimbo dzakasiyana dzemagariro uye kuyedzwa kwemarudzi ese ezvinhu kunogara kuchidya hunhu hwehupenyu, uye zvakare kunakidza iyo yakapusa yakapusa hunhu. "Kudzokera kuchokwadi" kunoreva kudzorera hunhu uye hupenyu mukusava nemhosva. Kana ecology yepasi, hutano hwevanhu uye xinxing zvese zvadzokera padanho rekutanga, uye nekunzwa zvakanaka zvinhu zvakakukomberedza, bvisa kuomarara kwakanyanya uye dzokera kune kwayo kukosha, hupenyu huchawana zvakawanda. Mavara akakosha e22 / 23 yemitambo yekuvhuvhu uye yechando inotorwa kubva kune zvakanaka zvinhu muhupenyu nemasikirwo. Ruvara psychology inokanganisa vatengi vanoteedzera tarisiro uye kuenzanisa hutano uye nharaunda, kuunza simba rakanaka uye pfungwa yekuchengeteka. Naizvozvo, akazara mavara echisikigo anoratidza simba rakasimba ndicho chinhu chikuru, mavara asina kwazvakarerekera anowedzera kugadzikana uye kupora anounza pfungwa yekuchengeteka, nepo yakadzika-yekuzadza mavara akajeka anoratidza yakachena, yakachengeteka, uye inozorodza mhedzisiro yepfungwa. Inofananidzwa nemwaka wapfuura, vhiri vhiri rese rine kusimba, uye kutaura kwetariro kwakasimba nepo hue isina kurasika.
Ruvara ruchena rusina kusvibiswa runouya kubva kuhupenyu, uye iyo isina kwayakarerekera iyo inodzokera kune yakasikwa haina kubhururuka uye ndeyechokwadi, ichiunza pfungwa yekugadzikana uye kupora. Iko kusimba kwemadziro emadziro kunounza kurudziro kune yakapfava yakarukwa yekumonera. Iyo hue yapfuura, yakapusa, inoshanda, yakasimba, uye inogona kushandiswa munguva dzese dzemwaka.
Unbleached pane 22/23 yematsutso uye yechando mbatya kuratidza zvinoitika zvekuchengetedzeka kwakapora, kupfava kuputira, kusununguka isina kuvharwa jira rakarukwa uye yakasununguka granular dehwe rejira inosanganiswa pamwe nekugadzirwa, yakakodzera kune ese-mamiriro ekunze mitambo uye kugwinya; panguva imwe chete, chena isina kuvharwa inogona zvakare kusanganiswa nefashoni Iyo vhezheni yebhizinesi inogona kuve chishandiso chakanaka chehofisi yakasununguka.
Kupenya Bhuruu kunoratidza pfungwa yekutonhora uye tekinoroji, kunounza hutano, kuchengetedzeka, uye hutsanana hwepfungwa mhedzisiro, uye inodzikamisa manzwiro. Kupenya kwebhuruu ndiwo matoni akakosha emuvara wenguva yemwaka nyowani, iyo inowedzera kupenya kwakazara kweruzivo rwekuona uye inoita kuti shanduko pakati pemavara iwirirane. Mwaka mutsva weGlow Blue unowedzera kuwedzera kugadzikana uye dhizaini dhizaini, iko kushandiswa kwerudzi rukuru uye neshanduro inokwanisa kuidudzira.
Kupenya kwebhuruu kwakakosha kuwirirana kara. Mashandisiro ayo ndiyo kiyi. Kupenya kwebhuruu ndiro rakanyanya ruvara, kusiya akawanda akaremara dhizaini dhizaini, uye kushandisa yakapfupika vhezheni kuita izere-muviri dhizaini dhizaini, kugadzira inotonhorera uye inotonhorera kupenya bhuruu. Iyo pfungwa pfungwa. Ruvara urwu rwakakodzera kutandara kwemaguta, kugadzikana kwemukati uye kushandiswa kwemafashoni ekunze mune akasiyana masitaera uye masitayera, uye hue yakasimba.
Pasi pemusoro wenyaya we "dzokera kuchokwadi" mumatsutso nemuchando musi wa 22/23, mavara asina kwazvakarerekera ane kuzara kwakadzika uye kupenya kwepakati anokurudzirwa semavara anoshanda uye akasimba, ayo anogona kushandiswa munzvimbo dzakawanda nemwaka; kurudziro inouya kubva pakunyura muhupenyu chaihwo, uye panguva imwechete inosanganisa iyo inodziya matauriro mameseji. Ruvara rwusina kwazvakarerekera nepfungwa yekuchengeteka inoonekwa mumuviri uzere, ichiwedzera kubata kwechiedza chitsvuku kune chisina ruvara, izvo zvinoita kuti vanhu vanzwe kugadzikana uye kupora.
Iyo yepakati-kupenya uye yakaderera-kuzadza inopfungairira grey inotora chinzvimbo chisingachinjiki pasi penyaya ye "dzokera kuchokwadi" mumatsutso nemuchando wa22 / 23. Kunyangwe ichishandiswa mune masutu akasarudzika kana majuzi akasununguka uye akareruka pasi, akasanganiswa nemicheka inoshamwaridzika neganda, inoratidza hutsi pachahwo Kwakasiyana kurapa kwese kwese kwese kweruvara hunhu. Maitiro akasiyana siyana anogona kudzora chero ezuva nezuva zvekupfeka.
Iyo yakadzika yegungwa girini inotorwa kubva kune zvakasikwa, ichiratidza pfungwa yekudzivirira kwepanyama mumatsutso uye munguva yechando ya22 / 23. Iyo inotorwa kubva kumakomo emamineral uye makomba eabyssal mune yakadzika yezvisikwa. Pukunyuka guta kuti unzwe runako rwechisikigo, kuunza pfungwa yekusava nebasa uye kutiza kubva pasirese; mwaka mutsva uri munyoro Inoburitsa pachena pfungwa yekukwirisa kweruvara, inoratidza simba rechisikirwo repasi, uye inowedzera fashoni kune zvipfeko zvemitambo, ichiita fashoni uye inowoneka ruvara munguva yekushandurwa mwaka wematsutso nechando.
Yakadzika uye yakadzikama yakadzika yegungwa girini yakakodzera seyakanyanya ruvara, inokodzera mitambo yemadhorobha uye zororo, mitambo yekunze, kugwinya kwemukati uye mamwe masitaera emitambo. Iyo yepamusoro-collar yekudzivirira cap dhizaini inopa chekudzivirira chiitiko, chakasanganiswa neanoshanda emahomwe emhepo uye zvimwe zvakadzama dhizaini kuratidza fashoni Mune iyo nyowani yekunze, iyo inopesana neyemhando yekudhinda inosanganiswa pamwe neyakafashama windbreaker silhouette inopa iyo nyowani mumugwagwa fashoni; kubva mumugwagwa kuenda kunze nekunze zvimwe zviitiko, zvakasikwa zvakadzama zvegungwa zvakasvibirira zvakakodzera.
Iyo mineral sarufa ruvara inotorwa kubva kune yakasikwa ore sarufa. Iyo yepamusoro yekuzadza kwemavara pfungwa ine chiratidzo chematsutso uye nguva yechando kugadzikana. Iko kubwinya kushoma kwemumigodhi nesarufa zvinogutsa iyo inodziya sarufa ruvara. Ichiri kuratidza mufaro uye manzwiro, inowedzera fashoni mamiriro kune mbatya dzemitambo, ichiita fashoni uye inoyevedza ruvara muvhuvhu nemuchando.
Iyo inodziya uye fashoni yemaminerari sarufa ruvara inokodzera kunge iro hombe ruvara, rinoshandiswa mumitambo yemaguta yekuzorora uye masitayiti emitambo yekunze, kana seyechipiri kara yekushongedza inosanganiswa nefashoni yemukati yekugwinya masitaera, iri zvakare fashoni; rakakora zvishoma uye rakapamhamha rakarukwa jira rakabatanidzwa Iyo diki-guta rakagadzirira-kupfeka silhouette inounza mafashoni kufamba kwemaguta. Inesarudzo isina kureruka uye yakasununguka yekumonera machira inogona kushandiswa seye pamusoro pevhu, inosanganiswa neyakavhurika mitambo vhezheni, kupa nyaradzo uye kuita kweese-emamiriro ekunze emitambo uye zororo. Iyo inoshanda mhepo shirring dhizaini uye isina mhepo yakakwira-yemutsipa ruzivo inosanganiswa neokunze isina mvura machira kuratidza fashoni yekunze maitiro. Kubva kuguta kuenda kugomo uye zvimwe zviitiko, iyo sarufa sarufa ruvara rwakakodzera.
Pasi pemusoro wenyaya we "Dzokera kuChokwadi", kuchena kweorenji inopenya zvishoma kuderedzwa, nekuratidzwa kwetoni tema uye kugadzikana kwemavara, hue inopa hunyanzvi hwe retro, ichiwedzera simba retro kune isina kujeka mamiriro ekuvhuvhu nechando, uye kuunza tariro kudingindira iri. Iko kushandiswa kwembatya dzemitambo kunonyanya kuratidzwa mune rakakura ruvara, rakashongedzwa nekusiyanisa bhuruu kusimudzira pfungwa ye retro.
Iko kuita kukuru kwemwaka mutsva weyakajeka retro orenji kunoshandiswa semuvara mukuru munzvimbo hombe, uye kushongedzwa kwemarudzi akasarudzika mavara anoratidzira iko kudzoka kwemanzwiro eruvara; inosanganiswa nesimbi isina mvura uye isina mhepo ine hunyoro hwakafara, inopa mashandiro kune yekunze fashoni uye inogona kushandiswa seyeyadhi inoenderana Sanganisa heterogeneous splicing umhizha kuratidza mafashoni magadzirirwo. Retro Vibrant Orange inokodzera kushandiswa muvaraidzo yemaguta, fashoni yekunze nemitambo uye mitambo yekuzorora.
Dingindira re "Dzokera kuChokwadi" rinotarisa mukusava nemhosva uye nemasikirwo. Iyo yakazara lapis lazuli bhuruu mune yakasviba color system inotorwa kubva kune yakasikwa lapis lazuli, uye nhete yegrey firita inowedzerwa, iyo yakapfava uye yakapusa, ichipa vanhu mweya wakadzikama uye wekutanga. Mushure menguva yekusagadzikana, lapis lazuli bhuruu inoonekwa munzvimbo hombe, uye machira ekushongedzwa anogona kuyedzwa kusanganisa zvinhu zvisinganzwisisike zvinoyevedza, zvinova zvinoshamisa, zvinodzora, uye zvine fashoni.
Mwaka uno, iyo lapis lazuli bhuruu yakadzikama uye yakadzorwa, uye zvakare iri yeimwe kiyi yemhando yemavara eiyo 22/23 yekuvhuvhu uye yechando. Chiedza chemhando yepamusoro velvet machira kana acetate machira ane kupenya zvishoma anopenya anowedzera simba rinoratidza re lapis lazuli bhuruu, inosanganisirwa nefashoni yakasarudzika juzi juzi, mabhurugwa asina kujairika nezvimwe zvinhu kuratidza fashoni pfungwa yemitambo yemumaguta. Iyo lapis lazuli yebhuruu inosanganisirwa uye inogona kushandiswa muhupamhi hwepakati-gobvu baseball jaketi kana anoshanda akajairwa majaketi, uye inogona kushandiswa mune dzakasiyana-siyana zvipfeko kusimudzira kushanda.
Pasi pemusoro wenyaya we "Dzokera kuChokwadi", iro rakasviba muonde wepepuru rinotorwa seimwe yeanowoneka mavara ephaleti. Inotorwa kubva mukukura kwechisikigo kwemaonde. Ivara chairo, asi panguva imwechete rinoratidza kugadzirwa kwekugadzira, saka ine zvese zviri online uye mutsetse. Pasi pekukwezva, iyi mhando yenhau uye yemhando fashoni inofanirwa kuyedza kusimudzira.
Iyo yakadzika uye yemafashoni maonde epepuru inokodzera kunge iro rakanyanya vara remaguta emitambo yekuzorora masutu uye kugadzikana kwemukati uye mimwe mitambo yemitambo. Micheka yakajeka yeganda inoshandiswa mune dhizaini dhizaini kuti iwedzere mafashoni magadzirirwo. Panguva imwecheteyo, inogona kushandiswa nemapatani ekushandisa zvizere muviri, smart uye fashoni; Yese-mutambo wakakodzera kune akasiyana masitayera ezvinhu pasi pemitambo yemaguta.